पार्टी प्यालेस व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छः भगवान बराल – Arthik Awaj
पार्टी प्यालेस व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छः भगवान बराल
By आर्थिक आवाज २०७५ असार १२ गते मंगलवार ०५:०१ मा प्रकाशित
बराल पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ सर्भिस
‘सरकारले यो व्यवसायलाई निरुत्साहित होइन, प्रोत्साहन गरोस्’
पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन् भगवान बराल । बिरौटामा बराल पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ सर्भिस सञ्चालन गरेका उनले व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनै बरालसँग बराल पार्टी प्यालेसका विशेषता, पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायको अवस्था लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
पार्टी प्यालेस व्यवसायमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
म २०५६ देखि क्याटरिङ व्यवसायमा आबद्ध भएको हुँ । बिगत ६ वर्षदेखि पार्टी प्यालेस व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छु । क्याटरिङ भन्दा अगाडि २०५३ सालदेखि पोखरामा चिया, खाजा तथा खाना खुवाउने सेवा व्यवसायमा थिएँ । त्यो भन्दा पनि अगाडि भारतमा काम गरेको अनुभव छ । अहिले पोखराको बिरौटास्थित जनजागरण मार्गमा ४ रोपनी जग्गामा बराल पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ सर्भिस सञ्चालन गरिरहेको छु । यो व्यवसायलाई आधुनिक र परिस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै स्तरीय सेवा प्रदान गर्न म सफल छु ।
बराल पार्टी प्यालेसको सेवा क्षमता कति छ ?
१ हजार ५ सय जना क्षमताको आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न हल छ । साना कार्यक्रमका लागि मिनी हलको सुविधा पनि छ । पर्याप्त पार्किङको सुविधा छ । एक पटकमा १ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई हामी खाना खुवाउन सक्छौं । हामीले ग्राहकको चाहना अनुसारको स्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । पारिवारिक वातावरणमा खाना खुवाउँछौं ।
पार्टी प्यालेसमा कति लगानी गर्नुभयो ?
पार्टी प्यालेसमा संरचना तयार पार्नका लागि मात्र करिब २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । प्रत्यक्ष १० जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ भने सिजनमा ३०÷४० जनालाई पार्टटाइम जब प्रदान गर्न सफल छौं । आवश्यकता अनुसार लगाती बिस्तार भइरहन्छ ।
बराल पार्टी प्यालेसका विशेषताहरु के–के छन् ?
हामी गुणस्तरमा ध्यान दिन्छौं । ग्राहक तथा उपभोक्तालाई सन्तुष्ट बनाउँछौं । स्वस्थकर खाना खुवाउँछौं । छिटो छरितो स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्नु नै हाम्रो विशेषता हो । पार्टी प्यालेस भित्र हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त टेन्ट, कुर्चीको सेवा पनि उपलब्ध छ । अर्डर अनुसार प्रदेश ४ को जुनसुकै ठाउँ पुगेर क्याटरिङ सेवा दिन्छौं ।
पार्टी प्यालेसमा व्यवसाय कस्तो छ ?
पछिल्लो समयमा हामीले खरिद गर्ने हरेक सामानको मूल्य आकासिएको छ । मासुको मूल्य बढेको बढ्यै छ । ४ वर्ष अगाडि खसीको मासुको मूल्य ६ सय रुपैयाँ थियो । अहिले ९ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । सिजन नहुँदा कुखुरा मासुको रेट घट्छ, हाम्रो व्यवसायको सिजन हुँदा बढ्छ । तर, हामीले ४ वर्ष अगाडिकै रेटमा सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । धेरै पार्टी प्यालेस खुलेका छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढेको अनुभूति हुन्छ । यस्ता धेरै समस्या छन् । यद्यपि, हाम्रो व्यवसाय सन्तोषजनक नै छ ।
पार्टी प्यालेस व्यवसायको सिजन कुनकुन महिना हो ?
फाट्टफुट्ट सधैं नै व्यवसाय हुन्छ । यद्यपि, वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ, फागुन बढी व्यवसाय हुने महिना हुन् । बिबाह हुने महिना तथा ब्रतबन्ध, पूजा, पार्टी हुने समय नै हाम्रो सिजन हो । सेमिनार तथा गोष्ठीहरु प्राय सबै महिनामा हुने गर्छन् ।
व्यवसायबाट सन्तुष्ट हुनुहन्छ ?
महिले अगाडि पनि भनिसकेँ पछिल्लो समय व्यवसायमा बढी प्रतिस्पर्धा बढेको छ । कतिपय साथीहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छन् । हामी राम्रो सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । म व्यवसायको गरिमा बचाउन चाहन्छु । केही वर्ष अगाडिसम्म साह्रै राम्रो थियो, पछिल्लो समय अपेक्षा अनुसार व्यवसाय नभएको साँचो नै हो । यद्यपि, म मेरो व्यवसायबाट पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट नै छु ।
पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय संवेदनशील छ । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग पनि यो जोडिन्छ । हामीले खुवाउने खाना स्तरीय हुनुपर्छ, स्वस्थकर हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु । हामीले सेवामा कुनैपनि कमजोरी गर्दैनौं । सरकारले पनि लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ । यो व्यवसायले प्रशस्तलाई रोजगारी दिएको छ । हामी करको दायरामा छौं । सरकारले यो व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउने होइन कि प्रोत्साहन गरोस् भन्न चाहन्छु ।